Qoysaska kala maqan dalka Sweden oo ay neef kasoo fuqday? - iftineducation.com
Laba sanadood kahor bay ahayd markii go’aan kasoo baxay maxkamad hoos tagta waaxda socdaalka ee dalkan Sweden (Migrationsverket) uu mabda’iyan mustaxiil kaga dhigay Soomaalida inay Sweden ku yimaadaan dacwo qoys kadib markii Soomaalida laga codsaday keenista waraaqo aysan jirin wadan ay u doonaan.
Hadaba iminka ayaa waxaa soo baxay go’aan cusub oo ka yimi maxkamadda rafcaanka ee isla waaxda socdaalka kaasoo u sahlaya qoysaska caruurta leh ee ku sugan Somalia ama dal 3-aad inay la midoobi karaan qaraabadooda Sweden.
’’Xukunkan cusubi wuxuu albaabada u furayaa inay Soomaali badani soo gasho dalkan Sweden. ‘’ ayuu yiri Michael Ribbenvik oo ah la taliyaha dhinaca sharciga ee gudi hoos taga waaxda socdaalka.
Ribbenvik oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in sharcigan loo tafsiiray si ay saqinimo kujirto sidii ay ahaan jirtayba marka la eegayo kiisaska qoysaska caruurta leh sida uu yiri.
Howlwadeenada waaxda socdaalka ayaa iminka eegaya go’aankan iyadoo ay yara deg deg tahay in laga hadlo saameynta uu go’aankani yeelan karo laakiin mabdi’iyan waa mid lagu dabiqi karo xaalka ay Soomaali badani ku sugan yihiin iyadoo markii go’aankan la eego la oran karo wax badan baa iska bedeley xaalka qoysaska Soomaaliya jooga ee doonaya inay yimaadaan dalkan Sweden.
Dhibaatada Soomaalida Sweden joogta ka haysatey inay ruqsad deganaan u helaan xubnaha qoysaskooda ee ku nool Soomaaliya ayaa bilaabatay kagadaal markii ay 2 sanadood kahor ay maxkamadda waaxda socdaalku soo saartay go’aan Soomaalida lagaga dalbanayo inay la yimaadaan warqado cadeeynaya haybtooda Soomaalinimo si ay rukhsad deganaansho uga helaan dalkan Sweden.
Taasoo waxaan suura gal ahayn la noqotay Soomaalida maadaama aanu dalka Soomaaliya lahayn nidaam dowladeed si saaxi ah u shaqeeya oo soo saara dukumentiyada noocan oo kale ah mudo ugu yaraan 20-meeyo sano ah.
Markaasoo uu qulqulkii Soomaalida ee iman jirtey dalkan Sweden oo ahaa 90% uu ku dhowaadey 0%.
Go’aankan oo dalbanaya in xiriirka dadka ilmaha isu leh lagu xaqiijiyo baarista dhacaan hida sidka ee DNA-da oo cadeeyn ahaan loo isticmaali doono ayaan khuseyn doonin dadka aan ilmaha isu lahayn laakiin is qaba oo iyaga weli looga fadhiyo inay cadeeyaan inay Soomaali yihiin.
Soomaalida ayaa tira ka dhowr jeer dibad baxyo kala duwan oo ay go’aankii hore ku diidanaayeen ka sameeysay magaalooyinka dalkan Sweden gaar ahaan magaaladan Gothenburg oo ah caasimadda 2-aad ee dalkan looga arimiyo.
Xafiiska Siyaasada Qaramada Midoobay (UNPOS) oo 18 sano kadib Manata laga furay Muqdisho (Daawo Sawirada)